Anjely (araka ny silamo) - Wikipedia
Anjely (araka ny silamo)
Ny anjely dia zava-manan' aina any an-danitra, izay irahin' Andriamanitra ho mpanelanelana azy sy ny olona ety ambonin' ny tany sady ho mpampita ny hafatra sy ny sitrapon' Andriamanitra amin' ny olona.
Amin' ny teny arabo , izay nanoratana ny Kor'any, dia atao hoe ملاك / malāk (raha tokana) na ملاًئِكة / malā'ikah (raha maro) ny anjely. Ireo teny ireo dia midika hoe "iraka, mpitondra hafatra".
Irak' Andriamanitra ny anjely. Namboarin' Andriamanitra tamin' ny hazavana na ny rivotra mafana izy ireo. Tsy afaka mandà ny asa ampanaovin' Andriamanitra azy ny anjely, tsy mitovy amin' ny olombelona sy ny jiny izay manan-tsafidy. Tsy afaka manota ny anjely. Tsy hotsaraina izy ireo amin' izany. Tsy lahy tsy vavy ny anjely. Tsy miteraka izy. Tsy misy noho izany ny atao hoe anjely ratsy.
Ambony noho ny olona rehetra, afa-tsy ny mpaminany Mohamady, ny anjely. Manohana sy miaro ny mpino amin’ ny fahavalony ny anjely. Misy ny anjely mpanelanelana ny olona sy Andriamanitra, ny anjely mpiambina, ny anjely mpitana an-tsoratra ny ratsy sy ny tsara ataon' ny olombelona ary ny anjely mpitondra ny fanambaràna ny miafina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Anjely_(araka_ny_silamo)&oldid=1037491"
Voaova farany tamin'ny 6 Septambra 2021 amin'ny 09:55 ity pejy ity.